Kooxda Manchester United oo go’aamisay lacagaha ay kula soo wareegeyso Harry Maguire – Gool FM
Haaruun June 16, 2019
(Manchester) 16 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa la soo warinayaa inay doonayso inay 80 milyan oo gini ah ku qarash-gareyso saxiixa Harry Maguire.
Guddoomiye ku xigeenka fulinta kooxda Manchester United ee Ed Woodward ayaa la soo sheegayaa inuu isku diyaarinayo inuu dalab 80 milyan oo gini ah hordhigo naadiga Leicester City si uu uga soo qaato daafacooda Harry Maguire.
Xiddiga xulka qaranka England ayaa la rumeysan yahay inuu diiradda u saaran yahay Manchester United iyo kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester City, taasoo keentay in Leicester City ay sare u qaado qiimaha.
Jariiradda The Sun ayaa soo jeedinaysa in Red Devils ay hadda diyaar u tahay inay horay u socdaan oo ay ka gudbiyaan Maguire dalab 80 milyan oo gini ah, isla markaana ay u badan tahay in aqbali doonto kooxda Foxes lagu naanayso.
Maguire oo ahaa ciyaaryahan kooxda Leicester ah labadii sanadood ee la soo dhaafay ayaa la siin doonaa heshiis shan sanadood ah oo uu garoonka Old Trafford kaga qaadanayo mushahar dhan 350,000 oo gini todobaadkii.
Haddii heshiiska uu u dhaco sida uu haatan u socdo, 26-sano jirkaan ayaa ka sare mari doona Virgil van Dijk oo iminka ah daafaca ugu qaalisan Adduunka.
Miyuu Mohamed Salah ogolaaday inuu xagaagan ka tago kooxda Liverpool?